OwakwaRed Bull uphazamise umgqigqo wezakwaMercedes – Bayede News
OwakwaRed Bull uphazamise umgqigqo wezakwaMercedes
Selokhu kuqale umqhudelwano iGrand Prix wezi-2019,
Posted on 12/07/2019 12/07/2019 by Bayede-News
Selokhu kuqale umqhudelwano iGrand Prix wezi-2019, uMercedes ubusayinqobe yonke imiqhudelwano.
IMercedes inqobe yonke imiqhudelano yeGrand Prix eyisi-8 yokuqala, uLewis Hamilton unqobe eyisikhombisa kulandelana owodwa wanqotshwa uzakwabo uValteri Bottas.Bobabili bangabashayeli bezimoto zakwaMercedes. NgeSonto uMax Verstappen odabuka eNetherlands ushintshe ukudla epletini enqoba i-Austrian Grand Prix enqobela izimoto zakwaRed Bull Racing e-Austria. UVerstappen uphume endaweni yokuqala, uCharles Leclerc oshayela izimoto zakwaFerarri uphume endaweni yesibili kwathi uBottas waphuma endaweni yesithathu.
Noma izimoto zakwaRed Bull zingekho ezingeni lezimoto zakwaMercedes nezakwaFerarri, phezu kunajalo uVerstappen ukhombise ubuhlakani bakhe enqoba i-Austrain Grand Prix. Ekuklelisweni kwabashayeli ngokomqhudelwano weGrand Prix ungaphambili kukaCharles Leclerc noSebastain Vettel abashayela izimoto zakwaFerarri.
Kunomuzwa wokuthi uVerstappen angase alishiye leli qembu lakwaRed Bull, enze okufanayo nokwenziwa uVettel elaxaza lona leli qembu esayina neFerarri ngowezi-2015. Umphathi waleli qembu uzithela ngabandayo ngalokhu uthi uVertappen unenkontileka neqembu ephela ngowezi-2020.Izimoto zakwaRed Bull esezisebenzisa injini yakwaHonda emveni yokulaxaza izinjini zakwaRenault, uHonda wagcina ukunqoba iGrand Prix ngowezi-2006 unqoba iHungarian Grand Prix.
Le nkampani yakwaHonda edabuka eJapan selokhu yabuyela ekuhlinzekeni ngezinjini ngowezi-2015 akuhambi kahle, emveni kokungenzi kahle komfelandawonye wabo nezimoto zimoto zakwaMcLaren bavumelana ngokuhlukana. Emveni kokusebenzisana nezimoto zakwaToro Rosso kuphela ngowezi-2018, uHonda kule sizini ubenesivumelwano sokuba ngumhlinzeki wezinjini zezimoto zakwaRed Bull.
Ukunqoba kukaVerstappen ngeSonto kube ngokokuqala ukuba uHonda unqobe selokhu ubuyile, uVerstappen ubonge uHonda ngegalelo layo ekunqobeni iGrand Prix e-Austria.UMercedes ukhale ngokuthi uhlulwe ngenxa yezinkinga zemoto ebishisa kakhulu okuphoqelele ukuba bangagijimi kakhulu, ngisho emakhoneni bekufanele behlise isivinini.Bathi bavulele zonke izinto ezisiza ukupholisa imoto kodwa kube zinhlanga zimuka nomoya. Okuyinkinga abathi ibangwe ukushisa kakhulu kwelanga e-Austria, uqale umjaho amazinga okushisa komoya engama-330C okwenze kubenzima ukuthi imoto iphole.
UMercedes uthembeni ekutheni isimo sezulu asizoshisa kakhulu eSilverstone kuBritish Grand Prix zili-14 kuNtulikazi 2019 ukuze bakwazi ukulungisa izinkinga zemoto bakwazi ukubuyela emgqigqweni wabo wokwenza kahle.Kanti noVerstappen uzofuna ukuqhubeka nokwenza kahle emveni kokunqoba i-Austrian Grand Prix.